Vaovao - Fametrahana fidirana fidirana am-baravarana amin'ny gorodona - fampidirana ny fomba fijanonana amin'ny varavarana
Ny mpiambina ny varavarana dia fitaovana kely ao ambadiky ny varavarana tsirairay izay manakana ny varavarana tsy hidona amin'ny rindrina. Na dia kely aza ny vavahady, dia misy vokany lehibe. Ny mpijanona varavarana dia afaka mampihena ny tabataba ary misoroka ny varavarana tsy hidona amin'ny rindrina ary miteraka fahasimbana amin'ny varavarana na amin'ny rindrina.
Fametrahana savoka varavarana gorodona
Mpijanona varavarana gorodona fametrahana-famaritana fohifohy momba ny vavahady
Ny mpiambina ny varavarana dia fantatra amin'ny anarana hoe fikasihan-varavarana. Izy io dia fitaovana ihany koa izay mitsoka sy mahita ny ravin'ny varavarana rehefa nosokafana mba tsy hikatona azy noho ny fitsofan'ny rivotra na ny fikasihan'ilay ravina varavarana. Ny mpijanona varavarana dia mizara ho mpiambina varavarana andriamby maharitra ary mpiambina varavarana elektromagnetika. Ireo mpijanona varavarana andriamby maharitra dia matetika ampiasaina amin'ny varavarana tsotra ary tsy azo fehezina amin'ny tanana fotsiny; ny mpiambina varavarana elektromagnetika dia ampiasaina amin'ny varavarana afo sy fitaovana varavarana sy varavarankely voafehy elektronika hafa, izay sady mifehy ny tanana no mifehy mandeha ho azy. asa fanaraha-maso.
Mpijanona varavarana gorodona fomba fametrahana fametrahana varavarana fametrahana
Voalohany, hamafiso amin'ny tompony raha toa ka apetraka amin'ny tany na eo amin'ny rindrina ny vavahady; avy eo sokafy ny varavarana amin'ny toerana ambony indrindra takiana mba hizaha toetra raha mety ny fijanonan'ny vavahady ary raha mety ny elanelana misy eo am-baravarana sy ny varavarana. Ataovy eo am-baravarana ny varavarana aorian'ny fametrahana ny toerana eo amin'ny toerany, sokafy ny varavarana ary andramo raha mitombina ny tena fandidiana, ao anatin'izany ny fidiran'ny mpiambina eo am-baravarana na ny fivoahany kely, inona ny zoro manokana an'ny mpijanona varavarana; aorian'ny famaranana ny toerana dia tadiavo amin'ny gorodona sy gorodona, tadiavo aloha ny toerana fijanonan'ny varavarana, ampiasao pensilihazo hanamafisana ny toeran'ny varavarana eo amin'ny gorodon'ny gorodona, mampiasa ny pensilihazo ny tompon'ny mpiasa mba hisaritana andalana eo amin'ny tany, hamafiso aloha ny toerana farany hisokafan'ny varavarana, ary avy eo dia hamafiso ny toerana fametrahana farany ny mpijanona varavarana; ny mpiasa tompony dia manao ny vavahady fijanonana Ny mariky ny toerana farany, ny antony ilana apetraka indroa, mba hahitana ny varavarana sy ny vavahady, dia ny fametrahana tsara kokoa. Ity no fomba tsara indrindra hanamafisana ny zoro an'ny mpijanona varavarana sy ny varavarana misokatra; ny asa manaraka dia ny fandavahana fandavahana herinaratra ary atsofohy amin'ny tany ny lavaka fametraham-baravarana. Ny mpiasa dia mitroka lavaka amin'ny gorodona, ary ny mpiasa masonry Aijia no mametraka azy. Mahery ihany koa ny taila. Ity mpijanona varavarana ity dia tsy mila mandroraka lavaka fotsiny; ny faran'ny raikitra amin'ny vavahady dia apetraka, ary mihidy ny visy eo aminy. Ny mpiambina ny vavahady dia mizara ho amin'ny farany voafaritra sy ny faran'ny varavarana. Mila apetraka ny farany voafaritra. Hamafiso ny visy alohan'izay, ary avy eo ampiasao ny lozisialy zoro anatiny tafiditra mba hanamafisana ny visy amin'ny tany na amin'ny rindrina; ny fampiasana zoro anatiny kely hanodinana ny visy dia asa tsara, tsy misy traikefa, ary avy eo mandalo amin'ny fanamafisana ny toerana, ny famelezana totohondry, ary aorian'ny fizotran'ny fivoriambe, ny asa manaraka dia ny fametrahana ny farany voafaritra amin'ny tany. Ampiasao ny fitaovana zoro anatiny tafiditra mba hanamafisana ny visy amin'ny faran'ny raikitra, ary hametraka azy ho azy ny mpiambina varavarana; ny sisin'ny vavahady eo am-baravarana dia azo hamafisina amin'ny visy. Tsy misy ilana azy ny mametraka ny sisin'ny varavarana raikitra hisitrihana hazavana. Ilaina ny mametraka ny varavarana. Ny lakileny dia ny mitady ny faran'ny varavarana. Ny fomba fanokafana ny varavarana faran'izay betsaka, avy eo mahita ny toerana tena misy eo am-baravarana, ary manenjana ny vavahady faran'ny varavarana amin'ny visy. Suction; Ampifanaraho tsara ny zoro amin'ny faran'ny raikitra amin'ny vavahady ary manenjana azy tanteraka. Ny dingana farany amin'ny fametrahana ny vavahady dia ny fampifanarahana tsara ny zoro amin'ny vavahady mba hahamety tsara ny vavon'ny vavahady, ary farany hanenjana tsara ilay visy.
Fametrahana varavarana fikolokoloana varavarana fikolokoloana
Mba hisorohana ny fivontosana mandritra ny fikirakirana ny vavahady; rehefa manadio ny tata-baravarana ianao dia miezaha tsy handena ireo faritra vita amin'ny vy. Voalohany, ampiasao lamba malefaka na kofehy vita amin'ny landihazo maina hanala vovoka, ary avy eo hamafana lamba maina mba hihamaina. Aza mampiasa mpanadio miloko, na manimba ny sosona amboniny.